Nanafatra mpanao gazety vahiny ny MAPAR:HANAO FAMPISEHOANA ANY SOAMAHAMANINA IREO MPANAO POLITIKA -
AccueilRaharaham-pirenenaNanafatra mpanao gazety vahiny ny MAPAR:HANAO FAMPISEHOANA ANY SOAMAHAMANINA IREO MPANAO POLITIKA
Hisy indray ny hetsika hotanterahin’ireo mpanao politika any Soamahamanina ny alatsinainy izao. Noho ny fanafarana mpanao gazety avy any ivelany no antony hanatanterahana ny hetsika raha ny nambaran’ireo mpikarakara. Mpanao gazety tsy fantatra hoe iza no nanafatra azy ho tonga eto Madagasikara? Azo antoka mantsy fa tsy ho tonga tamin’ny nahim-pony eto amintsika izany mpanao gazety izany. Tranga manamarika, sy manamafy fa tsy hetsika ho fikatsahana ny tombontsom-bahoaka intsony ity raharaha Soamahamanina ity, fa misy resaka ara-politika miaro fanakorontanana sy fanalam-baraka ny firenena. Taorian’ny nivoahan’ny didim-pitsarana nanafaka ireo namany voasambotra noho ny fanakorontanana, dia efa nitsahatra ny hetsika nataon’ireo tena mponina tao Soamahamanina. Ankehitriny anefa misy olona misora-tena ho mponina indray miezaka ny mamboly korontana vaovao , ary nanafatra mpanao gazety avy any ivelany mihitsy. Fantatra ihany hoe iza ireo mpanao pokitika tsy manao afa-tsy ny manakorontana ny fiainam-pirenena, ary milaza ho zanak’i Soamahamanina. Tsy iza izany fa i Augustin Andriamananoro izay mpikambana ao anatin’ny birao nasionalin’ny MAPAR. Ity mpanao politika ity izay matahotra miatrika ny fitsarana azy ka miafina hatramin’ny androany.
Hisy araka izany ny fampisehoana ataon’ireto mpanao politika ireto amin’ny alatsinainy ho avy izao. hanao sarintsarina filaharana ireo mpikarama an’ady hotaomina etsy sy eroa ho fanehoana amin’ireto vahiny fa tena mikorontana, sy tsy misy filaminana eto Madagasikara. Fomba mamohehitra fanaon’ireo mpanao politika tsy nahazo seza. Fomba amam-panaon’ireo mpanao politika lany henatra ka miseho vantana mitady seza ihany koa. Ireo efa zatra manao tohotra fiakarana ny vahoaka Malagasy mantsy no mikononkonona izao hetsika izao. Naleon’ireto mpanao politika ireto nandany vola nanafatra mpanao gazety vahiny ho any Soamahamanina hitadiavan-tseza, toa izay nanampy ny vahoaka niala tao anatin’ny fahasahiranana. Fihetsika toa mandatsa ny vahoaka malagasy. Azo antoka ihany koa fa tsy hipetra-potsiny manoloana izao fikononkononana korontana izao ny mpitandro ny filaminana. Tafiditra ao anatin’ny andro iray mialohan’ny hanombohan’ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ireo tany mampiasa manontolo sy amin’ny ampahany ny teny Frantsay na ny Frankofonia. Hiala maina indray araka izany ireto mikasa ny hanakorontana ny firenena mialoha ny handraisana ny Frankofonia izao.